शिक्षा/खेलकूद – Satyapati.com
Loading... आजः बुधवार, माघ ८, २०७६/ Wednesday 22nd January 2020 8:06 am
क्रिकेट मैदान नहुँदा स्कूलको चौरबाट जन्मिन्छन् राष्ट्रिय खेलाडी
बाँके । नेपालगन्जमा क्रिकेट मैदान छैन भन्दा धेरैले नपत्याउलान् । प्रश्न उठ्ला, क्रिकेट मैदान नै नभएर राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी कसरी जन्मिए ? कहाँ खेलाएर देशमै पहिलो महिला क्रिकेटर जन्माइयो ?...
काठमाडौं । अब उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि नै अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । यसअघि कक्षा १० अध्ययन गरे पुग्दथ्यो ।...
आठ कक्षासम्म रङ्गीन पाठ्यपुस्तक
काठमाडौं । कुनै समय यस्तो थियो, शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ महिना बितिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपाएर विद्यार्थीले हाहाकार मच्याउँथे तर पछिल्ला वर्षमा त्यस्तो समस्या कम हुँदै गएको छ ।...
हुम्लाका सबै विद्यालय ४५ दिन बन्द
हुम्ला । हिमाली जिल्ला हुम्लाका सम्पूर्ण विद्यालयहरु बुधबारदेखि ४५ दिनका लागि बन्द भएका छन् । नियमत पुस १६ गतेदेखि माघ मसान्तसम्म हिमाली जिल्लाहरुमा चिसोका कारण यो अवधीमा छुट्टी हुने...
उपमहानगरकै निर्देशन विद्यालयद्वारा अटेरी
बाँके । बाँकेमा केही दिनदेखि चिसो हावासँगै शीतलहर चलेको छ । मंगलबार विहानैदेखि घाम लागेको छ । अरु दिनको तुलनामा मंगलबार चिसो कम रहेको छ । यसअघि नेपालगन्जको अधिकतम...
विद्यालय क्षेत्रमै सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्रीवितरण, स्थानीय प्रशासन मौन
बाँके । बाँकेका विद्यालय क्षेत्रनजिकका पसलले मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ निर्बाध बिक्री गर्ने गरेका छन् । नियम, निर्देशिकाअनुसार विद्यालय क्षेत्रभन्दा करिब १०० मिटरको दूरीमा मात्रै सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थ...
विद्यालय बन्द गरेर नीजि घर बनाउँदै शिक्षक
बझाङ । विद्यालयका शिक्षक पढाउन छोडेर सदरमुकाम चैनपुरमा घर बनाउन व्यस्त छन् । विद्यालयका शिक्षक पढाउन छोडेर निजी घर निर्माण गर्न थालेपछि विद्यालयको पठनपाठन बन्द भएको छ । बझाङको...
आदर्श माविको जग्गामा अतिक्रमित गरी बनाएका १४ घरगोठ भत्काइयो
बाँके । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.२० गायत्रीनगरमा रहेका १४ घरगोठमा डोजर चलाइएको छ । आदर्श मावि, राँझाको जग्गामा बनाइएको भन्दै ती घरहरु भत्काइएको हो । वडा कार्यालय र विद्यालयको...
संरक्षणको पर्खाइमा युद्ध संस्कृत विद्यालय
बाँके । नेपालगन्जको पुरानो ऐतिहासिक युद्ध संस्कृत विद्यालय संरक्षण र सहयोगको पर्खाइमा रहेको छ । शिक्षक नारायण शर्माका अनुसार, यो विद्यालयमा झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी अरुको घरमा काम गर्न...
संस्कृति जोगाउन खेलकुद
कैलाली । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा थारु संस्कृति जोगाउन खेलकुद हुने भएको छ । थारु समुदायको नयाँ वर्ष माघीको अवसरमा कैलालीको हसुलियामा दोस्रो थारु सांस्कृतिक प्रदर्शनी हुने भएको छ ।...